ကမ္ဘာ့ပထမဆုံး SLED Smart TV ကို ကြေညာလိုက်တဲ့ Realme - MyMedia
Realme အမှတ်တံဆိပ်က နည်းပညာလောကထဲကိုရောက်လာတာ သိပ်မကြာသေးပါဘူး။ ၂ နှစ်ဝန်းကျင်ပဲ ရှိပါသေးတယ်။ ဒါပေမယ့် စမတ်ဖုန်းနဲ့ပတ်သက်လာရင် နာမည်ကျော်ပြီး ဈေးကွက်အတော်များများကိုလည်း ဖြန့်ကျက်ပြီးဖြစ်နေပါပြီ။
Realme ဟာ စမတ်ဖုန်းအမှတ်တံဆိပ်အနေနဲ့ စတင်လာတယ်ဆိုပေမယ့် အကုန်ထုတ်၊ အကုန်ရောင်းမယ့် ပုံစံမှာရှိနေပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ကပဲ ကမ္ဘာ့ပထမဆုံး SLED 4K Smart TV ကို ကြေညာလိုက်တာပါ။ ဒီတီဗီက ဈေးကွက်ထဲကို ပို့ဆောင်ဖို့ အဆင်သင့်ဖြစ်သေးတာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။
Realme ရဲ့ SLED 4K Smart TV ဟာ Quantum Dot အခြေပြုမျက်နှာပြင် (QLED) တွေနဲ့ယှဉ်ရင် စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းတဲ့ အချက်အလက်အချို့ကို ပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ်။ SLED နည်းပညာဟာ 55-inch TV နဲ့အတူ ပွဲထွက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ အမျိုးအစားသစ် Panel ဟာ NTSC color spectrum ကို 108% လွှမ်းခြုံမှုပေးစေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် TUV Rheinland က Blue light ပမာဏကို ထိန်းချုပ်ထားမယ်လို့ သိရပါတယ်။
SLED ဆိုတာကတော့ LCD ဖော်မြူလာပေါ်မှာပဲ အခြေခံထားပြီး နောက်ခံအလင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ အဓိကတီထွင်မှု ဖြစ်ပါတယ်။ ပုံမှန်အားဖြင့် Backlight ဟာ အဖြူရောင်ပါ။ RGB filters တွေကတစ်ဆင့် နှီးနွယ်တဲ့ Color triplet တွေကို ဖန်တီးပေးတာ ဖြစ်ပါတယ်။
SLED ကတော့ Backlight ကို အနီ၊ အစိမ်းနဲ့ အပြာရောင် LED တွေကို Triplet ဖန်တီးစေတာပါ။ ဒါပေမယ့် LCD အနေနဲ့ ရှိနေပြီး Polarizer နဲ့ Liquid crystal layer တွေလည်း ရှိနေပါဦးမယ်။ QLED နဲ့ ကွဲပြားတဲ့အချက်က ဒီနည်းပညာဟာ Blue backlight နဲ့ စတင်ပါတယ်။ Quantum Dots ကို အသုံးပြုပြီး Blue light ကို စုပ်ယူတဲ့နောက် အနီရောင်၊ ဒါမှမဟုတ် အစိမ်းရောင်ကို ထုတ်လွှတ်ပါတယ်။
ဒီနောက်မှာ LCD layer က Pixel တစ်ခုချင်းစီရဲ့ ဖြတ်သန်းသွားတဲ့ အလင်းပမာဏကို ထိန်းချုပ်ဖို့ ကူညီပါတယ်။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ပန်းတိုင်ဟာ အနီ၊ အစိမ်းနဲ့ အပြာရောင်တွေကို ရယူဖို့တင်မကဘဲ ဒီအရောင်တစ်ခုစီတိုင်းရဲ့ အကောင်းဆုံးလှိုင်းအလျားကို ရဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါနည်းနဲ့ပိုကျယ်ပြန့်တဲ့ရောင်စဉ်နဲ့ ရုပ်ပုံအရည်အသွေးကို တိုးတက်စေပါတယ်။
SLED ဟာ ပြဿနာကို ချဉ်းကပ်ရာမှာ QLED ထက်ပိုပြီး သာလွန်ကောင်းမွန်တယ်လို့ Realme က ယုံကြည်နေပါတယ်။ Samsung နဲ့ OnePlus လို ပြိုင်ဘက်တွေကတော့ QLED TV တွေကို ထုတ်လုပ်ထားနှင့်ပြီး အိန္ဒိယဈေးကွက်ထဲမှာလည်း ဖြန့်ချိနေပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ Realme အနေနဲ့ SLED နဲ့အတူ ဈေးကွက်ဝေစုကို ဘယ်လောက်ထိရယူနိုင်မလဲဆိုတာကို စောင့်ကြည့်ရပါဦးမယ်။
The post ကမ္ဘာ့ပထမဆုံး SLED Smart TV ကို ကြေညာလိုက်တဲ့ Realme appeared first on MyTech Myanmar.
MyMedia2020-09-26T06:35:59+06:30September 26th, 2020|MYTECH MYANMAR|
နှစ်နိုင်ငံကြား တင်းမာမှုရှိနေပေမယ့် တရုတ်ဈေးကွက်မှာ ဝယ်လိုအားကောင်းနေသေးတဲ့ iPhone 12
Vivo က 6G ဟာ AR/VR Glasses နဲ့ Robots အတွက် အရေးပါလာမယ်လို့ ပြော
iPhone 12 ရောင်းချတဲ့အချိန်နဲ့ ကိုက်ပြီး iMovie ကို HDR Support ပေးလိုက်တဲ့ Apple
AI Benchmark မှာ သရဖူဆောင်းသွားတဲ့ Huawei Mate 40 Pro
Samsung Galaxy F12 (or F12s) ကို အိန္ဒိယမှာ မကြာခင် ကြေညာနိုင်
Samsung ရဲ့ Flagship Killer ဖုန်းတစ်လုံး / S20 Fan Edition !!!
Google Maps မှာ စက်ဘီးနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ လုပ်ဆောင်ချက် အသစ်တွေ ပါလာ
၁ မီတာအထိ တိကျမှုရှိတဲ့ Navigation Algorithm အသစ်ကို ဆောင်ရွက်နေတဲ့ OPPO
Spotify ကို Google Account နဲ့ Login ဝင်ရောက်နိုင်ပြီ
ကြီးမားတဲ့ Cover Display နဲ့ Foldable ဖုန်းအသစ်ကို မူပိုင်ခွင့်ရယူလိုက်တဲ့ Huawei
Snapdragon 450 Chipset နဲ့ မိတ်ဆက်လာမယ့် Samsung Galaxy A02s
3C Certification ရလာပြီဖြစ်တဲ့ Redmi Note 10 4G (M2010J19SC)
လာလီဂါမှာ အသုံးပြုနေတဲ့ VAR က ဘာစီလိုနာကိုပဲ ဆန့်ကျင်လျက်ရှိနေတဲ့ ကိုးမန်းပြောဆို